Ngaba i-Apple's Mail Privacy Protection (MPP) iyichaphazela njani iNtengiso ye-imeyile? | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 15, 2022 NgoLwesibini, Februwari 15, 2022 UGreg Kimball
Ngokukhutshwa kwamva nje kwe-iOS15, iApple ibonelele abasebenzisi bayo be-imeyile ngoKhuseleko lwaBucala lweMeyile (MPP), ukunciphisa ukusetyenziswa kweepikseli zomkhondo ukulinganisa isimilo esifana namaxabiso avulekileyo, ukusetyenziswa kwesixhobo, kunye nexesha lokuhlala. I-MPP ikwafihla iidilesi ze-IP zabasebenzisi, isenza umkhondo wendawo ube ngakumbi. Ngelixa ukwaziswa kwe-MPP kunokubonakala ngathi kuguquguquki kwaye kunamandla kwabanye, abanye ababoneleli bebhokisi yeposi abakhulu (IiMBPs), njenge-Gmail kunye ne-Yahoo, sele besebenzisa iinkqubo ezifanayo iminyaka.
Ukuqonda ngcono i-MPP, kubalulekile ukuba ubuye umva kwaye uqale uqonde ukuba amava omlinganiselo ovulelekileyo wabathengisi aya kutshintsha njani.
I-caching yomfanekiso ithetha ukuba imifanekiso ekwi-imeyile (kubandakanywa neepikseli zokulandelela) ikhutshelwa kwiseva yoqobo kwaye igcinwe kwiseva ye-MBP. Nge-Gmail, i-caching iyenzeka xa i-imeyile ivuliwe, ivumela umthumeli ukuba achonge xa ​​esi senzo senzeka.
Apho isicwangciso se-Apple sahluka kwabanye nini i-caching yomfanekiso iyenzeka.
Bonke ababhalisile abasebenzisa umxhasi we-imeyile we-Apple kunye ne-MPP baya kuba nemifanekiso yabo ye-imeyile ifunyenwe ngaphambili kwaye igcinwe xa i-imeyile ihanjiswa (ithetha ukuba zonke iipikseli zokulandelela zikhutshelwa ngokukhawuleza), kubangela ukuba i-imeyile ibhalise njenge. vu lekile nokuba umamkeli akazange ayivule ngokwasemzimbeni i-imeyile. IYahoo isebenza ngokufanayo neApple. Ngamafutshane, ii-pixels ngoku zinika ingxelo nge-100% yereyithi yokuvula i-imeyile engachanekanga.
Kutheni le nto ibalulekile? Ukunyaniseka idatha ibonisa ukuba i-Apple ilawula ukusetyenziswa komxumi we-imeyile malunga ne-40%, ngoko oku ngokuqinisekileyo kuya kuba nefuthe kumlinganiselo wentengiso ye-imeyile. Umzekelo, iindlela zokuthengisa ezisekiweyo ezinje ngonikezelo olusekwe kwindawo, i-automation ye-automation kunye nokusetyenziswa kweetekhnoloji ezahlukeneyo zonikezelo olulinganiselweyo njengezibali-xesha zokubala kuya kuba nzima, ukuba akukho kufutshane akunakwenzeka ukuzisebenzisa ngokufanelekileyo kuba amaxabiso avulekileyo akathembekanga.
I-MPP luphuhliso olungelishwa lwabathengisi be-imeyile abanoxanduva abasele bebambelele kwiindlela zokuziphatha ezilungileyo eziphucula amava ababhalisi. Thatha ingcamango yokukwazi ukulinganisa uthethathethwano usebenzisa ireyithi evulekileyo ukuze uphume ezantsi kubabhalisi abangasebenziyo, kwaye ngokukwanjalo, uphume ngokukhawuleza ababhalisile abangasebenziyo. Ezi zenzo, xa zisetyenziswa ngokuchanekileyo, ziyimiqobo ebalulekileyo yokuhanjiswa kakuhle, kodwa kuya kuba nzima kakhulu ukuziphumeza.
Ukuqaliswa kwe-GDPR kwiminyaka embalwa edlulileyo kubonise ukuba kutheni i-shishini liyamkela ukuthengisa ngokuziphatha.
GDPR uthathe okuninzi kwezona zinto bezisele zigqalwa njengezona ndlela zilungileyo - imvume eyomeleleyo, ukungafihlisi okukhulu, kunye nokhetho olubanzi/ukhetho olubanzi - kwaye luzenze zaba yimfuneko. Nangona abanye abathengisi be-imeyile bayithatha njengentloko ebuhlungu ukuthobela, ekugqibeleni kubangele idatha esemgangathweni kunye nebrand eyomeleleyo / ubudlelwane bomthengi. Ngelishwa, ayingabo bonke abathengisi abalandela i-GDPR ngokusondeleyo njengoko befanele okanye bafumana izithuba ezinje ngokungcwaba imvume yokulandela umkhondo we-pixel kwimigaqo-nkqubo emide yabucala. Loo mpendulo inokuba sesona sizathu siphambili sokuba i-MPP kunye nezenzo ezifanayo zamkelwe ngoku qinisekisa abathengisi balandela iindlela zokuziphatha.
Isibhengezo se-MPP ye-Apple selinye inyathelo elibhekiselele kubumfihlo bomthengi, kwaye ndiyathemba ukuba inokuphinda imisele ukuthembela kwabathengi kwaye yomeleze kwakhona ibhrendi/ubudlelwane bomthengi. Ngethamsanqa, abaninzi abathengisi be-imeyile baqala ukulungelelanisa kakuhle ngaphambi kokuqaliswa kwe-MPP, beqonda ukungachaneki kwemilinganiselo yesantya evulekileyo, njengokulanda kwangaphambili, ukugcinwa kwe-caching ngokuzenzekelayo ukwenza umfanekiso / ukukhubaza, uvavanyo lokucoca kunye nokubhaliswa kwe-bot.
Ke abathengisi banokuqhubela njani phambili ekukhanyeni kwe-MPP, nokuba sele beqalile ukuziqhelanisa nemigaqo yokuthengisa yokuziphatha, okanye le mingeni mitsha?
Ngoku ka DMA ingxelo yophando Umkhangeli we-imeyile wentengiso ngo-2021, kuphela ikota yabathumeli ngokwenene bathembele kumazinga avulekileyo ukulinganisa ukusebenza, kunye nonqakrazo olusetyenziswe kabini ngokubanzi. Abathengisi kufuneka batshintshe ugxininiso lwabo lugqibelele ngakumbi kunye nembono epheleleyo yokusebenza kwephulo, kubandakanywa neemetrics ezifana namazinga okubekwa kwebhokisi kunye neempawu zesidima somthumeli. Le datha, idibaniswe kunye neemetrics ezinzulu kwi-funnel yokuguqula ezifana nemilinganiselo yokucofa kunye nemilinganiselo yokuguqulwa, ivumela abathengisi ukuba balinganise ngokufanelekileyo ukusebenza ngaphaya kokuvula, kwaye bachanekileyo kunye nemilinganiselo enentsingiselo. Ngelixa abathengisi banokufuna ukusebenza nzima ukuze baqonde ukuba yintoni ekhuthaza ababhalisi babo ukuze bababandakanye, i-MPP iya kukhuthaza abathengisi be-imeyile ukuba babe nenjongo ngakumbi malunga nokufumana ababhalisi abatsha kwaye bahlale begxile kwiimethrikhi eziya kuqhubela phambili ishishini labo phambili.
Ukongeza, abathengisi be-imeyile kufuneka bajonge kwisiseko sedatha yabo yangoku yababhalisi kwaye bayivavanye. Ngaba abafowunelwa babo basexesheni, bayasebenza kwaye ngaba babonelela ngexabiso kumgca ongezantsi? Ngokugxininisa ekufumaneni ababhalisi abaninzi, abathengisi bahlala betyeshela ixesha elifunekayo ukuze baqinisekise ukuba abafowunelwa esele benabo kwisiseko sedatha bayasebenza kwaye baluncedo. Idatha embi itshabalalisa isidima somthumeli, ithintele ukubandakanyeka kwe-imeyile, kwaye ichitha nje izixhobo ezixabisekileyo. Yeyiphi apho izixhobo ezifana Everest - iqonga lempumelelo ye-imeyile - ngena. I-Everest inamandla okuqinisekisa ukuba uluhlu lucocekile ukuze abathengisi bakwazi ukugxila kwixesha labo kunye nemali yokunxibelelana kunye nokudibanisa nababhalisi abaxabisekileyo abanako ngokwenene ukuguqula, kunokuba bachithe kwiidilesi ze-imeyile ezingasebenziyo. isiphumo sokugxumeka kunye nokungahanjiswa.
Nje ukuba idatha kunye nomgangatho woqhagamshelwano uqinisekisiwe, ugxininiso lwabathengisi bee-imeyile kufuneka lutshintshele ekuhanjisweni okulungileyo kunye nokubonakala kwiibhokisi ze-inbox zababhalisi. Indlela eya kwi-inbox intsonkothe ​​ngakumbi kunokuba uninzi lwabathengisi be-imeyile becinga, kodwa i-Everest iphinda ithathe ingqikelelo ngaphandle kokuhanjiswa kwe-imeyile ngokubonelela ngemibono esebenzayo kumaphulo. Umsebenzisi we-Everest,
Ukuhanjiswa kwethu kunyukile, kwaye sikwimeko engcono yokuyisusa engafunekiyo urekhoda kwangaphambili kakhulu kwinkqubo. Ukubekwa kwethu kwe-inbox kunamandla kakhulu kwaye kuyaqhubeka kunyuka...ukuhlala siphumelele sithatha onke amanyathelo kwaye sisebenzisa ezona zixhobo zibalaseleyo kushishino ukwenza njalo.
UCourtney Cope, uMlawuli weMisebenzi yeDatha kwi MeritB2B
Ngokubonakala kwiimetrics zentengiso ye-imeyile kunye nodumo lomthumeli, kunye nokuchonga iindawo zengxaki kunye nokubonelela ngamanyathelo okuzisombulula, ezi ntlobo zezixhobo zixabiseke kakhulu kubathengisi be-imeyile.
Ekukhanyeni kwe-MPP kunye ne-spotlight ehlaziyiweyo kwiindlela ezilungileyo zokuthengisa, abathengisi be-imeyile kufuneka baphinde bacinge ngeemetrics kunye nezicwangciso ukuze baphumelele. Ngendlela ephindwe kathathu - ukucinga kwakhona ngeemetrics, ukuphonononga umgangatho wesiseko sedatha kunye nokuqinisekisa ukuhanjiswa kunye nokubonakala - abathengisi be-imeyile banethuba elihle lokugcina ubudlelwane obuxabisekileyo kunye nabathengi babo kungakhathaliseki ukuba uhlaziyo olutsha luphuma kubanikezeli bebhokisi leposi abakhulu.
Khuphela iNgxelo ye-imeyile ye-DMA yokulandelela i-imeyile ka-2021
tags: apileimeyile yeapilecourtney copeumgangatho wedatha ye-imeyileukuhanjiswa kwee-imeyileemail Marketingiimetrikhi ze-imeyileImfihlo ye-imeyileukuthengisa ngokuziphathaEverestgdprinboxiOSIOS15idilesi ye-ipimeyile ukhuseleko lwabucalaumboneleli webhokisi yemeyilembpumgangatho2bimeyile ephathekayomppIipikseli zokulandela umkhondosekileubungqina obungapheliyoyahoo
UGreg yiNtloko yeHlabathi yeZisombululo ze-imeyile kwi-Validity. Ungumdali kunye nomakhi. Ingaba uyila iwebhusayithi, ukudala inethiwekhi yoluntu, okanye ukwakha i-skyscraper, inkqubo iyafana; iinkcukacha umdlalo. Kwaye uyakuthanda ukudlala.
IiNtengiso zakho kunye namaQela eNtengiso anokuyeka ukufaka igalelo kwiDigital Fatigue